बुढेशकालमा 'लभ' र 'प्रविधि अपराध' | Citizen Post News
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकुमा साइबर क्राइम सम्वन्धि समस्या बोकेर दैनिक आउने मान्छेहरुको भीड दिनानुदिन बढेको छ । प्रहरीले सार्वजनिक सूचनामार्फत साइबर अपराधमा संलग्न नहुनलाई बारम्बार सचेत गराउँदै पनि आएको छ । अहिले सामुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत जनचेतना फैलाउने काम पनि त्यतिकै भइरहेको छ ।
तैपनि साइबर अपराध दिनानुदिन बढेको छ, जुन निकै चिन्ताको विषय बनेछ । सूचना र प्रविधिको पहुँचसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराध ह्वात्तै बढेको अपराध महाशाखा टेकुको रेकर्डले देखाउँछ । सूचना तथा प्रविधिको सहज पहुँच र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग पछिको दुरुपयोगले निम्त्याएका अनगिन्ति घटनाहरुमध्ये अलि छुट्टै यहाँ दुई वटा घटना जोड्न खोजिएको छ ।
घटना नम्बर एकः
केही समय पहिले धनाड्य तथा संभ्रान्त परिवारकै एक जना महिला आफ्नो चिनेजानेका एक बहिनीमार्फत महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकु पुगिन । उनको समस्या निकै गम्भीर थियो । उमेरले ५० काटिसकेकी उनी आफ्नो छोराको उमेर बराबरको केटासँग प्रेममा थिइन ।
त्यसैबीचमा उनले आफ्नो प्राइभेट फोटो र भिडियो पनि खिचिनन मात्र, त्यो केटालाई पनि सेयर गरिन । सम्वन्धमा दरार बढ्दै जाँदा केटाले त्यै देखाएर ब्ल्याकमेलिड सुरु गर्यो । उनले धेरै पटक मनाएर, फकाएर र पैसा दिएर पनि साम्य पारिन । तर परिस्थितिले उग्ररुप लिन थालेपछि उनी प्रहरीलाई गुहार माग्न टेकु पुगिन ।
घटना नम्बर दुईः
करिब एक बर्ष पहिले विवाहित एक जोडी आफ्नो सानो नानी बोकेरै अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकु आइपुग्यो । प्रहरीसामु समस्या राख्ने क्रममा त्यो विवाहित जोडीले कसैले प्राइभेट भिडियो सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न पोर्न साइटमा हालि दिएपछि समस्या परेको घटना विवरण सुनाए । भिडियोसहित बोकेर प्रहरीसामु पुगेको त्यो जोडीले समस्या आफ्नो नभई आफ्नो आमाको भनिरहँदा उनीहरुको समस्या सुन्ने प्रहरी नै छाँगोबाट खसे झैं भए । कारण थियो-पीडितको समस्या बोकेर जाने ज्वाई छोरी थिए ।
हजुरआमा समेत बनिसकेकी ति महिला पहिला एक जना युवकसँग प्रेममा थिइन । सहमतिमा नै उनीहरुले रोमान्स गरेको भिडियो खिचे । त्यो क्रम अर्थात उनीहरुबीचको रोमान्स लामो समयसम्म चल्यो पनि । अन्ततः केटाको विवाह भयो, बच्चाबच्ची पनि । त्यसपछि उनीहरुबीच कुनै सम्वन्ध थिएन । ५० बर्ष काटिसकेकी ति महिलाको बषौंपछि त्यो भिडियो सार्वजनिक होला भनेर उनले कल्पना पनि गरेकी थिइनन । उजुरी भने त्यै सम्वन्ध बनाउने केटामाथि नै पर्यो । केटालाई खोज्दै प्रहरी र पीडित महिलाको ज्वाँईसहित टोली केटाको घर पुग्यो ।
तब केटाले पनि 'सम्वन्ध थियो, त्यस्तो भाको पनि हो । तर उक्त भिडियो यति पछाडि आएर म किन हाल्थे र सर ? जब कि मेरो आफ्नै परिवार छ । मलाई पनि त समाजको डर छ ?' भन्दै ति महिला र आफूबीचको पहिलाको सबै सम्वन्धको राम कहानी सुनाए । त्यसपछि प्रहरीले पीडित महिलाको ज्वाँईलाई सोध्यो-'यो केटाले त होइन जस्तो छ । सबै सत्य नै बोलेजस्तो लाग्यो ? के गर्ने त ?' उनले जवाफमा मलाई नि त्यस्तै लाग्यो सर भने । 'होस पक्राउ गरेर उसको जीन्दगी किन खराब पार्ने ?' उनले त्यसो भनेपछि प्रहरी फर्कियो ।
प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा ति महिला निम्मपरिवार तथा अनपढ भएको थाहा भयो । उनको श्रीमान नभएका कारण उनले आफुसँगै एक क्याटरिङ कम्पनीमा काम गर्ने ति युवकसँग सम्वन्धमा रहिन । मोबाइलमा खिचेर भिडियो त राखियो तर मोबाइल सबैलाई चलाउन दिने हुँदा त्यो भिडियो आफ्नै असावधानीका कारण कसैले लिक गरिदिएको निष्कर्षमा प्रहरी पुग्यो । यहाँ दुई वटा घटना त्यो पनि महिला कै जोड्नु पछाडि पनि कारण छ ।
एउटी धनाड्य अर्थात संभ्रान्त परिवार र अर्की निम्नस्तर परिवारकी महिला । दुवैको समस्या एउटै, गल्ती दुवैको उस्तै । बाहिरी सम्वन्धले जन्माएको पीडा र प्रविधिमा आधारित अपराध । हिजोआज यस्तै अनगिन्ति समस्या बोकेर पीडितहरु प्रहरीकहाँ धाउनेक्रम बढ्दो छ । 'यस्ता घटना अरुको कारणबाट मात्र हुन्नन । त्यसको कारण कतिपय अवस्थामा हामी आफै पनि बनिरहेका हुन्छौं । किन भिडियो र फोटो सुट गर्नुपर्यो ? किन मोबाइलमा राख्नु पर्यो ? अथवा आफ्नो नीजि भिडियो-फोटो किन अरुलाई सेयर गर्नु पर्यो ?' साइबर अपराधको अनुसन्धानमा खटिने एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । यस्ता समस्या बच्न सर्वप्रथमतः सर्वसाधारण आफै पनि सचेत हुनुपर्ने प्रहरीको भनाई छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखामा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म हजार दुई सय भन्दा बढि साइबर अपराधका उजुरी दर्ता दर्ता भएको देखिन्छ । यो हिसावले हेर्ने हो भने दैनिक एकभन्दा बढि साइबर अपराधका घटना अपराध महाशाखा टेकुमा मात्र पर्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल विशेष गरेर फेसबुक, इमेल, ट्वीटर, युट्युब, एसएमएस, एटीएमलगायतबाट पनि साइबर अपराधका घटना बढेको देखिन्छ । त्यस्ता अपराधबाट बच्नलाई प्रहरीले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर विभिन्न माध्यामबाट जनचेता फैलाइरहेको छ । यस्ता समस्याबाट बच्न सर्वप्रथम त आफैं सचेत हुनुपर्ने प्रहरीको भनाई छ ।